Nin abaal marin ku helay qalab Biyo-sifeyn oo uu curiyey - BBC Somali
Nin abaal marin ku helay qalab Biyo-sifeyn oo uu curiyey
Biyo-fiiltareeye dhuuqa wax kasta min maar curiyaha fluoride ilaa bakteeriya, fayrasyada iyo suntan cayayaanka lagula daggaalamo ayaa qofkii sameeyay uu ku guuleystay abaal marin heer sare ah oo Afrikaan oo wax casriyeyn lagu helo.
Qofkii alifay ama sameeyay oo ah injineer dhanka kiimikada ah oo ah Tanzanian laguna magacaabo Askwar Hilonga, ayaa wuxuu isticmaalaa tiknoolojiyada iniinaha maatarka ee molecularka ama atoomiga iyo ciid si uu u nadiifsho biyo.
Wuxuu u sheegay BBC-da in wax casriyeyntiisaasi ay tahay inay caawiso 70%-ka qoysaska kunool Tanzania ee aan heysan biyo la cabbo oo nadiif ah.
Abaal marinta oo qiimaheedu yahay £25,000 ( oo u dhiganta $38,348), ayaa waxay ahayd mid nooceeda ah tii ugu wacneyd oo ay bixiso Akadheemiyada Injineeriyada ee Boqortooyada Ingiriiska.
Xaakimka ugu sareeya Malcolm Brinded ayaa sheegay in ninkaa wax casriyeyntiisu ay wax ka baddali karto nolosha dad badan oo Afrikaan ah iyo dad kale oo ku kala nool daafaha caalamka.